Tababar lagu baranayo Dawlada wanaaga & Xalinta Qilaafaadka oo u furmay Ururka dhalinyarada – Radio Muqdisho
Tababar lagu baranayo Dawlada wanaaga & Xalinta Qilaafaadka oo u furmay Ururka dhalinyarada
Gudoomiye Ku xigeenka Arimaha Bulshada Maamulka Gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Axmed(Jakeeti) ayaa maanta Siminaar u furtay ururka dhalinyarada Gobolka Banaadir
Siminaarkaan oo socon doono labo cisho ayaa waxaa lagu baran Doonaa Dowlad wanaaga iyo Xalinta Qilaafaadka .
Tababarkan ayaa loogu tala galay in dhalinyarada sare lagu qado Aqoonta ay u leeyihiin Dawaladnimada iyo sidi ay u xalin lahayeen qilaafaadka dhanka kalan ay u la shaqaynta lahayeen maamulka gobolka Banaadir.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa wada didaalo u ku doonayo sidi looga faa idaysan laha
dhalinyaraada soo dhameysay waxbarshada heeraar keeda kal duwan.
Guddoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada Maamulka gobolka Banaadir Basma ayaa dhalinyarada kula Dardaarantay in ay ka shaqeeyan Amniga Magaalada Muqdisho Madama dhalinyaradu ay tahay laf dhabarta Bulshada.
Soomaalida Minnesota oo ka banaan baxay Muuqaal Tv-ga dalkaasi tabiyey